eHimalaya Online || News from nepal » आजको राशिफल यी निम्न राशिको लागानीमा शुभ तपाइको कस्तो रहला ?
२०७८ मङ्सिर २१ गते मङ्गलबार || 2021 Dec 07 Tuesday
आजको राशिफल यी निम्न राशिको लागानीमा शुभ तपाइको कस्तो रहला ?
२०७७ माघ २९ गते बिहिबार ०१:५२
मेष:- राज्य समर्थन हुनेछ। रोकिएको काम पूरा हुनेछ। आध्यात्मिकतामा रुचि हुनेछ। धन प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ। राज्य र व्यापार क्षेत्रमा उचित नाफा हुनेछ। परिवारमा खुशीको वातावरण हुनेछ। जीवनसाथीको उत्थानले सामाजिक सम्मान बढाउँदछ। ...
मेष:- राज्य समर्थन हुनेछ। रोकिएको काम पूरा हुनेछ। आध्यात्मिकतामा रुचि हुनेछ। धन प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ। राज्य र व्यापार क्षेत्रमा उचित नाफा हुनेछ। परिवारमा खुशीको वातावरण हुनेछ। जीवनसाथीको उत्थानले सामाजिक सम्मान बढाउँदछ।
वृष:- योजना फलदायी हुनेछ। घर बाहिर सोधपुछ बढ्नेछ। कार्य पुर्ण हुनेछ। व्यापारमा लाभदायक हुनेछ। आत्मविश्वास बढनेछ। व्यापारमा थुलो नाफाको योग रहेको छ। यात्रा गर्दा सावधान रहनुहोस्। हतार र लापरवाहीको साथ व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुहोस्।
मिथुन:- कुनै आर्थिक समस्या हुन सक्छ। नयाँ कार्यहरूमा सफलता प्राप्त हुनेछ। व्यापारले राम्रो गर्नेछ। स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। खर्च बोझ बढ्नेछ। चोटपटक र दुर्घटनाबाट बच्नुहोस्। लेनदेनमा सावधान रहनुहोस्। जोखिमका कामबाट बच्नुहोस्। विवाद नगर्नुहोस्।
कर्कट:- बक्यौता रकम को लागी प्रयास सफल हुनेछ। यात्रा सफल हुनेछ। नाफाका अवसरहरू बढ्नेछन्। जोखिम नउठाउनु होला। आवास सम्बन्धि समस्या हुनेछ। रचनात्मक कार्यको लागि पुरस्कार प्राप्त हुनेछ। विगतमा गरिएको कामको शुभ परिणामहरू प्राप्त हुनेछन्। आत्म-शिक्षामा रुचि बढ्नेछ।
सिंह:- महत्वपूर्ण कार्यहरू साथीहरूको सहयोगमा सम्पन्न हुने आशा गरिन्छ। साझेदारीमा नयाँ प्रस्तावहरू हुनेछन्। अनावश्यक खर्च हुनेछ त,नाव रहनेछ। विवाद प्रचार नगर्नुहोस्। जोखिम कामबाट बच्नुहोस्, आराम सामान्य हुनेछ। आर्थिक स्थिति कमजोर रहनेछ।
कन्या:- नयाँ कपडा प्राप्त हुनेछ। रोजगार बढ्नेछ। यात्रा सफल हुनेछ। मन खुशी रहनेछ। बोलिलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। श्रम अझ बढी गर्नुपर्नेछ। तपाईंको कार्यहरूको समाज र परिवारमा आ,लोचना हुन सक्छ। व्यापार सामान्य रूपमा चल्नेछ।
तुला:- राज्य समर्थन हुनेछ। जीवनसाथीबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ थकान हुनेछ व्यापारमा ठीक छ। विवाद त्याग्नुहोस्। नयाँ कार्यहरूले फाइदा लिन सक्ने सम्भावना छ। परिवारको प्रगति हुनेछ। तपाईंले आफ्नो कर्ममा विश्वासका साथ कार्य गर्नु पर्छ।
वृश्चिक:- रोजगार बढ्नेछ। कुनै ठूलो सम्पत्ति सम्झौता हुन सक्छ। ठूलो फाइदा हुनेछ। कुनै हतार नगर्नुहोस्। प्रमादबाट बच्नुहोस्। दूरदर्शिता र बुद्धिमत्ताको साथ, धेरै ठप्प कामहरू सम्पन्न हुने आशा गरिन्छ। खर्च कम गर्नुपर्नेछ। व्यापारमा सही निर्णय नगर्दा घाटा हुन सक्छ।
धनु:- पार्टी र पिकनिकको आनन्द मिल्नेछ। बौद्धिक कार्य सफल हुनेछ। व्यापारमा ठीक छ। मन खुशी हुनेछ दिन प्रतिकूल हुन सक्छ। सामाजिक स्थिति र प्रतिष्ठा मा परिवर्तन को बारे मा चिन्ता हुनेछ। विवाहित जीवन राम्रो रहनेछ। धेरै प्रलोभनमा नपर्नुहोस्।
मकर:- रोकिएको काम पूरा हुनेछ। कडा परिश्रमले सफल हुनेछ। घर बाहिरबाट सोधपुछ हुनेछ। व्यापार ठीक छ। खुशी हुनेछ नयाँ योजनाहरू लागू गरिनेछ। ठूला व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुनेछ, जसको लाभ भविष्यमा प्राप्त हुनेछ। शत्रुहरू पराजित हुनेछन्। आलस्य त्याग्नुहोस्।
कुम्भ:- पुराना साथी र आफन्तहरू भेट हुनेछन्। कुनै राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ। व्यापार ठीक छ। खुशी हुनेछ व्यापार राम्रो गर्नेछ। पारिवारिक वातावरण सहयोगी हुनेछ। तपाईको बुद्धिमत्ताका साथ समस्याहरूको समाधान सम्भव छ। सुख र समृद्धि बढ्नेछ।
मीन:- आमाबुवाको स्वास्थ्य ठीक हुनेछ। दिन खुशीसाथ व्यतीत हुनेछ। व्यापार मा लाभको स्थिति हुनेछ। रोकिएको पैसा प्राप्त को योग छ। दु:खद समाचार आउन सक्छ। दौड अधिक हुनेछ। थकान हुनेछ बोलिलाई नियन्त्रण आवश्यक छ।
प्रकाशित मिति २०७७ माघ २९ गते बिहिबार ०१:५२
गोल्डेन लेहेंगा मा परिजस्तै देखिइन सदाबहार शुन्दर अभिनेत्री रानी मुखर्जी। हेरौ यी तस्बिरमा।
सन्तान मोह: अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले छोरीको मायालु नाम राखिन ‘टुलु’ हेरौ केही तस्बिरमा ।
मलाइ सैफ अली खान कि शुन्दर छोरी सारा अलि खान मन पर्छ।”निर्देशक रोहित शेट्टी”
अभिनेत्री रश्मी देसाईले यसरी देखाइन खुट्टा को ट्या,टु यिनका फ्यान भए प,सिनै प,सिना। हेरौ यी तस्बिरमा
अभिनेत्री सारा अलि खान ४० किलो तौल घटाएर यति धेरै ह,ट, देखिइन।आउनुहोस जानौ सारा अलि खानको फिटनेसको राज।
मलाइका अरोरा को से,क्सी फि,गरमा अर्जुन कपुर ल,ठ्ठै । हेरौ यी तस्बिरमा!
आजको राशिफल आज लक्ष्मी पुजाको दिन कस्तो रहला हजुरहरुको दिन?, जान्नुहोस ।
२०७८ कार्तिक १८ गते बिहिबार ०१:३२
आजको राशिफल शुभ अशुभ कस्तो रहला त हजुरको दिन?, जान्नुहोस ।
२०७८ कार्तिक १५ गते सोमबार ०१:०५
आजको राशिफल आज शनिबार शनिदेवको दर्शन गर्दै राशिफल पढौ ।
२०७८ कार्तिक १३ गते शनिवार ०१:०७
आजको राशिफल यी निम्न राशिका रोकिएर रहेका धन मिल्ने योग रहेको छ, कोसिस गर्नुहोला ।
२०७८ कार्तिक १२ गते शुक्रबार १२:५६